भोलिदेखि स्वास्थ्यमन्त्री यादव एयरर्पोटमा झुल्किने ! - भोलिदेखि स्वास्थ्यमन्त्री यादव एयरर्पोटमा झुल्किने !
भोलिदेखि स्वास्थ्यमन्त्री यादव एयरर्पोटमा झुल्किने !
२०७५, १५ भदौ, 01:22:39 PM
काठमाडौं । विदेशी शीर्ष पाहुनाहरुलाई स्वागत र विदाईको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलद्धारा बिदाई गर्ने कार्यक्रम आजदेखि सकिएको छ ।
बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका लागि आएका विदेशी शीर्ष पाहुनाहरुलाई स्वागत र विदाईको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेले अब उनीहरुको विदाईका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने छैनन्।
बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका लागि आएका श्रीलङ्काली राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेना आइतबार र भूटानी प्रधानन्यायाधीस छिरिङ वाङचुक शनिबार स्वदेश फर्कनेछन्।
सिरिसेना र वाङ्चुकको विदाईमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने भएका छन् । बिमस्टेक सम्मेलन सकिएकै रात उपप्रधाननमन्त्री विदेश भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्ने भएपछि बाँकी रहेका दुई पाहुनाको विदाईको जिम्मा अर्का उपप्रधानमन्त्री यादवले पाएका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका प्रेस संयोजक लोकेन्द्र केसीका अनुसार पोखरेल आजै साँझ लेवनन तथा पोल्याण्ड भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्दैछन्। हाल यूनिफिल मिसनमा नेपाली सेनाको श्रीबरख गण र मिलिटरी अब्र्जभर तथा स्टाफ अधिकृत गरी ८ सय ७२ शान्ति सैनिक तैनाथ छन्।
लेवनान भ्रमणका क्रममा नेपाली मिसनलाई राष्ट्रसंघले तोकेको जिम्मेवारीमा रहेर लेवनानको राजनीतिक संकट अन्त्य गर्न निर्वाह गरेको भूमिकाबारे पोखरेलले विशेष सम्बोधन गर्नेछन्।
लेवननमा रहँदा उनले त्यहाँका रक्षामन्त्री याकुब रियाद एल सर्राफ सहित लेवनानका उच्च तहका पदाधिकारी तथा राजनीतिज्ञहरुसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको केसीले बताए।
लेवनानस्थित युनिफिल मिसन नेपाली सेनाको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रसंघीय मिसन हो, जुन मिसन १९५८ देखि लेवननमा रहँदै आएको छ। लेवननको दुई दिने भ्रमणपछि पोखरेल पोल्याण्ड प्रस्थान गर्नेछन्। पोल्याण्ड सरकारको निमन्त्रणमा उनी त्यसतर्फ जान लागेका हुन्।
पोल्याण्डका प्रतिरक्षामन्त्री एन्टोनी मसिओएजको निमन्त्रणामा त्यसतर्फ जान लागेका पोखरेलले ‘एक्सपो’ सहभागी मुलुकका सेनाले प्रयोग गर्ने सैन्य सामग्रीलगायतको जानकारी लिनेछन्।
भ्रमणका क्रममा समकक्षी एन्टोनी मसिओएजसँग आपसी हित र सहायता आदान(प्रदानबारे हुने छलफलपछि उनी २३ भदौमा काठमाडौँ फर्कनेछन्।